Ukukhishwa Kwe-Ultrasonic Cold Water kwePsilocybin - Hielscher Ultrasound Technology
Isizinda se-Ultrasonic Cold Water se-Psilocybin
Ukuhlukanisa i-psilocybin kusuka kwisikhunta esisha nesomisiwe sezinhlobo ze-psilocybe kwaziwa njengokudla isikhathi futhi kaningi kungasebenzi kahle. Nge-ultrasonic isizinda i-psilocybin, i-psilocin, i-baeocystin ne-norbaeocystin ikhishwa ngokushesha kusuka kumakhowe amasha we-psilocibe amasha. Isizinda se-Ultrasonic siphula izindonga zeseli zamakhowe ukuze izinto eziphilayo zikhululwe ngokuphelele, ukuze kufezeke inqubo esebenza kahle kakhulu futhi esheshayo.
Isizinda se-Ultrasonic Psilocybin
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa ngempumelelo ezimbonini eziningi njengokudla, okwelapha, imboni yezimonyo, kanye nemboni yamakhemikhali amahle ukukhipha nokuhlukanisa izinto ezihlanganayo kanye nezinye izinto ezintweni zokusetshenziswa. Inqubo ye-ultrasonic ibhekwa njengeyisebenza kahle kakhulu, iyashesha, inokwethenjelwa, iphephile futhi kulula ukuyisebenzisa kanye nendlela yokukhipha enobungani bemvelo. Ngenxa yalezi zinzuzo, i-ultrasonically-assisted extraction (UAE) idlula ezinye izindlela zokukhipha. Amakhemikhali afana ne-psilocybin, i-psilocin, i-baeocystin ne-norbaeocystin asevele ekhishwe ngempumelelo kusetshenziswa imishini ye-Hielscher Ultrasonics. Isizinda se-ultrasonic samakhemikhali e-psychedelic sinikeza isivuno esiphezulu sekhwalithi ephezulu yokukhipha ngaphakathi kwenqubo ye-turbo-extraction. Isizinda se-Ultrasonic sihambisana nanoma iyiphi i-solvent futhi sivumela ukukhiqizwa kwezinto ezikhishwe ngokugcwele.
I-Ultrasonication iyindlela esheshayo futhi emnene yokufakelwa ekhweni yokukhiqiza ikhwalithi ephezulu yekhowa. Kuvidiyo, i-UP400St isetshenziselwa ukukhipha i-shitake extraktion.
Ukukhishwa Kwamakhowe Wobanda Namanzi usebenzisa i-ultrasonic extractor UP400St ene-22mm probe S24d22L2
I-ultrasonicator UP400St i-extractor enamandla yokukhishwa kwe-psilocybin kumakhowe
Isizinda se-Ultrasonic – Indlela Yokukhipha Okubandayo
Amakhemikhali e-bioactive azwela ukushisa, okusho ukuthi anciphisa futhi abole ngaphansi kwamazinga okushisa aphezulu ukuze akhulule umphumela wawo namandla. Ngakho-ke, iningi lesizinda sezitshalo lisizakala ngendlela engeyona eyokushisa, engasuselwa ekushiseni okuyisisekelo sokusebenza esiyisisekelo. Isizinda se-Ultrasonic siyindlela yokukhipha imishini, okuyindlela yokusebenza okuyisizukulwane se-acoustic cavitation.
Kuyini i-Ultrasonic Cavitation futhi ikuthinta kanjani ukukhipha?
Isibonelo, lapho uketshezi luhanjiswa nge-ultrasound probe ngo-20kHz, ukudlidliza okungama-20 000 ngomzuzwana kudluliselwa kulowo maphakathi. Amagagasi e-ultrasonic ahamba ngalolu ketshezi, lapho enza khona imijikelezo ephezulu yokucindezela (ukucindezela) / ingcindezi ephansi (i-rarefaction noma ukunwetshwa). Ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okuphansi, amabhamuza we-vacuum amancane noma izimbotshana zenzeka kulolo ketshezi, olukhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yengcindezi. Ngesikhathi sesigaba sokucindezelwa ketshezi namabhamuza, ingcindezi ivuma, kuyilapho isigaba se-rarefaction sikhiqiza i-vacuum (ingcindezi engemihle. Ngesikhathi semijikelezo yokwanda kokucindezela, izimbotshana ezikulolu ketshezi zikhula zize zifinyelele usayizi, lapho zingakwazi khona ukumunca amandla amaningi. Ngalesi sikhathi, bahamba ngamandla. Ukufakwa kwalezi zikhala kuphumela emiphumeleni ehlukahlukene enamandla kakhulu ye-sonomechanical, eyaziwa njengesimo se-acoustic / ultrasonic cavitation. Ngesikhathi sokufakwa kwamabhamuza e-ultrasonic e-cavitation, amandla aminyene wamandla anjenge-shear ephezulu, ukusakazwa ketshezi kanye ne-turbulence kwenziwa kuketshezi olune-sonicated. La mandla okubamba amandla aphazamisa izindonga zeseli zezicubu zezitshalo futhi akhiphe izinhlanganisela ezingaphakathi kwamangqamuzana, kufaka phakathi izinto eziphilayo ezifana ne-hallucinogenics psilocybin, i-psilocin, i-baeocystin ne-norbaeocystin evela ezinhlotsheni zamakhowe. Imijikelezo eshintshashintshayo ephezulu yengcindezi / yengcindezi encane iphinde ikhuthaze amazinga wokudluliswa okukhulu kwesisindo, okuholela ekukhiqizweni okuphezulu kokukhipha okutholwe yi-sonication. Isizinda se-Ultrasonic singakhipha okuqukethwe okuphelele kwezinto ezivela kuma-botanicals.
Isizinda se-Ultrasonic Psilocybin: Isinyathelo-nge-Isinyathelo
Ungakhipha i-psilocybin nezinye izinto ezi-bioactive kusuka kumakhowe usebenzisa amanzi, i-ethanol noma i-200 ethyl alcohol njengama-solvents.
Sika amakhowe amasha noma omisiwe e-psilocybin abe izingcezu nezicucu ezincane. Ungasebenzisa amakepisi neziqu. Zombili ziqukethe izingxube ze-psychoactive, kepha ama-caps ahlala ecebile ku-psilocybin. Izinhlamvu aziqukethe i-psilocybin.
Beka amakhowe aqoshiwe ku-beaker yengilazi bese uwagcwalisa ngamanzi abandayo.
Ngokuzikhethela, ungabeka i-glass beaker kubhavu weqhwa ukugcina izinga lokushisa lenqubo libanda ngangokunokwenzeka.
I-slurry e-sonicated iba luhlaza okwesibhakabhaka ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka aqukethe i-psilocybin ekhishwe ezithelweni zamakhowe.
Hlukanisa izingcezu zamakhowe nemfucumfucu ngokuhlunga noma ukuhlunga. Ngokuzithandela, gcina okokusebenza kwamakhowe ekuhlungweni kokukhishwa kwesibili usebenzisa amanzi noma i-ethanol.
Sebenzisa uhlelo lokuhwamuka ukususa i-solvent. 1 kuya ku-2 amagremu wamakhowe omlingo omisiwe kufanele akhiqize ngo-approx. 1cc wokukhishwa kokugcina. Njengoba amakhowe kungumkhiqizo wemvelo, okuqukethwe kwezinto ze-psychedelic kungahluka.
Gcwalisa ukukhishwa kokugcina esitsheni seglasi esimnyama noma ku-vial bese ugcina efrijini.
Ngesinyathelo sokuzikhethela se-crystallization, impilo eshalofini yokukhishwa kwe-psilocybin ingaqhubeka isikhathi eside.
UP400St – i-400 watts enamandla i-ultrasonic probe-type extractor yokukhipha i-psilocybin kusuka kumakhowe
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction
isizinda esiphelele ngokwengeziwe
Inqubo ebandayo / Inqubo engashisi
Iyahambisana nanoma iyiphi i-Solvent
Kulula Futhi Kuphephile Ukusebenza
I-Psilocybin itholakala ezinhlotsheni ezingaphezu kuka-200 zamakhowe ohlobo lwesine lwefungus iConocybe. I-Panaeolus, i-Psilocybe, iStropharia, konke okulungele ukukhipha i-psilocybin esebenzayo ye-psilocybin ultrasonically. Ngokuvamile, amakhowe aqukethe i-psilocybin akhombisa lezi zici ezilandelayo: Anezinhlamvu ezimnyama, isikhunta se-lamella / gill, akhula kakhulu enhlabathini ecebile nge-humus emadlelweni nasezinkuni zezifunda ezishisayo nezingaphansi kwezindawo ezishisayo futhi akhombisa imihuzuko eluhlaza okwesibhakabhaka eyenzeka ngenxa ukusabela okwenziwe nge-oxidative, lapho ikhowe liphathwa noma lonakele.
Izinhlobo ezaziwa kakhulu zamakhowe aqukethe i-psilocybin yi-Psilocybe cubensis, equkethe izinto ezimbili ezisebenza ngengqondo, i-psilocybin ne-psilocin. Ngokujwayelekile kwaziwa njengama-shrooms, amakhowe omlingo, iziqongo zegolide, ama-cubes, noma amakepisi egolide, iPsilocybe cubensis ingeyomndeni wesikhunta iHymenogastraceae, futhi ngaphambili yayaziwa njengeStropharia cubensis. Njengoba isatshalaliswa kabanzi futhi kulula ukuyihlakulela, iPsilocybe cubensis yizinhlobo zamakhowe ezaziwa kakhulu nge-pscilocybin.
I-Psilocybe cubensis kungenzeka ukuthi idume kakhulu ngemiphumela yayo ye-hallugcinogenic, edalwa kakhulu ngamakhompiyutha asebenzayo abangela amava e-psychedelic ngemuva kokungenisa. Izinhlanganisela zayo ezinkulu zengqondo yilezi:
I-Psilocybin (4-phosphoryloxy-N, N-dimethyltryptamine)
I-Psilocin (4-hydroxy-N, N-dimethyltryptamine)
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction Systems
Izinzuzo zesizinda se-ultrasonic isivuno esikhulu sokukhishwa kwamakhemikhali we-psychedelic (ie i-psilocybin, i-psilocin, i-baeocystin, i-norbaeocystin), ukukhetha kwamahhala kwe-solvent (isb. Amanzi, i-ethanol, ingxube yamanzi notshwala njll), kanye nelula nephephile ukusebenza. Ngenxa yamandla amakhulu we-sonication, izixazululi zemvelo nezincane ezinjengamanzi, i-ethanol njll. Zivame ukwanela ukufeza isilinganiso esinqunyiwe sokukhipha kanye nesivuno. Ngenxa yalokhu, isizinda se-ultrasonic sinciphisa isikhathi sokukhipha futhi sinikeze ukusetshenziswa okuncishisiwe kwama-solvents noma ukusetshenziswa kwama-solvents amnene, amahle. Lokhu kusho ukuthi isizinda se-ultrasonic sivumela zombili, amazinga aphezulu wokukhipha kanye nokukhishwa okunempilo (isb. Ukukhishwa kwamanzi abandayo). Njengoba izinga lokushisa lenqubo lingalawulwa ngokunembile ngesikhathi se-sonication, ukubola okushisayo kwezinto ezikhishwayo ngenxa yokushisa okuphezulu ngokweqile kanye nokuhwamuka kwezinto kugwenywa.
Ama-Ultrasonicators aphezulu we-Mushroom Extraction
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-extractors ephezulu ye-ultrasonic kusuka ezincane kuya ezinkulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa kwesakhiwo se-ultrasonic okufanele kakhulu kunqubo yakho. Ukusetha kahle kwe-sonication kuncike kumthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi. Okuhlangenwe nakho kwethu okude, abasebenzi abaqeqeshwe kahle bazokuncoma ukuthi usebenzise i-ultrasonic ekhipha kakhulu futhi bazokusiza ngesikhathi sokusungula inqubo yakho yokukhipha amakhowe.
Isizinda se-Ultrasonic – I-Batch ne-Inline
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ngokuya ngevolumu yenqubo yakho nokufakwa kwehora ngalinye, ukucubungula okusemgqeni kunganconyelwa imiqulu ephezulu yokucubungula. Ngenkathi ukuqoqwa kwama-violin amakhulu isikhathi nesikhathi nokusebenza ngamandla, inqubo eqhubekayo yokuxubana kolayini iyasiza njengoba isebenza kahle, iyashesha futhi idinga umsebenzi omncane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kokukhipha ivolumu yesizinda sakho nezinhloso zenqubo.
Ama-Ultrasonic Extractors wawo wonke amandla womkhiqizo
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza isibonisi esigcwele sama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze okukhipha okulunge kakhulu kwe-ultrasonic kwempahla yakho eluhlaza, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Izinhlelo ze-Ultrasonic benchtop zilungele ukuhlolwa okungenzeka nokusebenza kwenqubo. Ukulinganiswa komugqa ngokuya ngemingcele yenqubo esungulwe kwenza kube lula kakhulu ukukhulisa amandla wokucubungula kusuka ezinkatho ezincane kuya ekukhiqizeni ngokugcwele ukuthengisa. Ukukhuphula amandla kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu yokukhipha i-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana. Nge-UIP16000, i-Hielscher inikeza i-extractor ye-ultrasonic enamandla kunazo zonke emhlabeni.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwe-ultrasonic isizinda se-bioactive phyto-nutrient kanye nama-hallucinogenic compounds avela ku-botanicals. Okuluhlaza njengamakhowe athambile athambile adinga i-sonication elukhuni namasethingi we-amplitude aphansi, kanti amakhowe omisiwe angadinga i-sonication kuma-amplitudes aphakeme ukukhipha okuqukethwe okungaphakathi kwamaseli. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwamapharamitha enqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha imbewu yakho ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yemiphumela emihle kakhulu yokukhipha!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho zokukhishwa.
Njengebhizinisi eliqhutshwa ngumndeni futhi eliqhutshwa ngumndeni, iHielscher ibeka phambili amazinga aphezulu kakhulu wezinhlelo zayo ezisezingeni eliphakeme. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwe ngokuphelele ekhanda lethu eliseTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuba namandla nokwethenjwa kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher ka-Hielscher kuyenza ibe ihhashi lomsebenzi ekukhiqizweni kwakho. Ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi komthwalo ophelele nasezindaweni ezifunwayo kuyisici esingokwemvelo sabahlanganisi abasebenza kakhulu be-Hielscher.
Ungathenga iprosesa le-Hielscher le-ultrasonic nganoma yisiphi isayizi ehlukile futhi ulungiselelwe kahle inqubo yezidingo zakho zokukhishwa kwamakhowe. Ukusuka ekwelapheni isikhunta endaweni encane yelabhu kuye ekuqhubekeni okuqhubekayo-ngokuxuba ama-mushroom slurries ezingeni lezimboni, iHielscher Ultrasonics inikeza i-ultrasonicator efanelekayo kuwe! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma ukusetha okuhle kwe-ultrasonic!
Ultrasonic Psilocybin Extraction kusuka Amakhomikhali
Ama-mushroom we-Organic akhishwe nge-Ultrasound
Amakhowe, aqukethe izinto ezinengqondo / izimo ze-psychedelic ezifana ne-psilocybin, i-psilocin, ne-baeocystin, aziwa ngokuthi amakhowe angama-psychedelic, amakhowe omlingo, ama-shrooms, ama-truffles omlingo nama-mush. Izinhlobo ezingaphezu kwezingu-180 zamakhowe eziqukethe i-psilocybin noma i-psilocin yayo etholakala.
Amakhowe e-Psilocybin ayimthetho emazweni amaningi, isib. I-USA, Canada, Europe, India. EU.SA, zihlukaniswa njengezinto ezilawulwa yiSheduli I, kodwa maduzane, i-FDA ne-DEA ziye zavumela ezinye izifundo ezincane ezilawulwa kakhulu ekusebenziseni kwabo ekulawuleni izidakamizwa zezokwelapha nezengqondo. Imiphumela ye-psilocybin namanye ama-psychedelics iye yacwaningwa ngemiphumela yabo kanye nokwelashwa okungenzeka kube khona ukukhathazeka okunjengokuhlukunyezwa kwamakhanda, ukukhathazeka kwemizwelo nokulutha.
I-Psilocybe cubensis ingenye yamakhowe omlingo athandwa kakhulu enikeza ukuhlunga okuphakathi kwe-psilocybin ye-approx. 0.63% i-psilocybin ne-0.60% i-psilocin kumakhowe asendle omisiwe. Amakhowe asetshalwe ngaphakathi angenawo amakhemikhali awo asebenzayo.
P. tampanensis 0.68 0.32 na
P. hoogshagenii 0.60 0.10 na
P. cyanofibrillosa 0.21 0.04 na
P. liniformans 0.16 na 0.005
I-Psilocybin iyisisindo sokusebenza kwengqondo, i-hallucinogenic esitholakala kumakhowe wesigodi sasePsilocybe, iPanaeolina, iPanaeolus, Copelandia, Conocybe, iGymnopilus, iStropharia noPluteus futhi kubhekwa njengesidakamizwa esingumlutha.
Ngaphandle kwe-psilocybin, i-psilocin ne-baeocystin kukhona izinto ezimbili ezisebenzayo ezitholakala kumakhowe omlingo.
I-potency yama-mushroom ingahluka kakhulu kusukela amakhowe engumkhiqizo wemvelo, oqala ukuphendula imvelo yawo. Izingxenye ezihlukahlukene zamakhowe ziyahlukahluka, futhi (isib. Isikhumba kanye nesitshalo singase sibe nezithako ezahlukene zezinhlanganisela ezingokwengqondo). Ngenxa yokuhlukahluka kwemvelo, i-maceration, i-homogenization kanye ne-ultrasonic isizinda kungasiza ukunciphisa ingozi yokungalindelekile (noma obuthakathaka) amanani we-psilocybin.
Ukusetshenziswa kanye nemiphumela: Emva kokuphathwa kwe-psilocybin, kunemiphumela eminingi ehlukahlukene yokuziphendulela kuye kwabikwa ukuthi yikuphi okuvela emizweni yokukhathazeka, ukungahambi kahle, ukugcoba, ukuthokoza, injabulo nokucindezeleka. Okungenani. ingxenye yesithathu yabasebenzisi izwa imizwa yokukhathazeka noma i-paranoia. Ukulinganisa okuphansi kwezidakamizwa kungadala imiphumela ye-hallucinatory, i-hallucination eye-closed-eye, kanye / noma i-synesthesia (okuhlangenwe nakho kwemizwelo ebuhlungu uma ubheka imibala). Emanzini aphezulu, i-psilocybin ingabangela ukwandiswa kwezimpendulo eziphathekayo, ikhono elikhuthaziwe lokufaka ingeniso, ukuguqula ekucabangeni kokuqala nokufana nengane, nokusebenza kokulandelana kwememori ecacile. Ama-hallucinations ebonakalayo evulekile-amehlo ajwayelekile futhi angachazwa kabanzi nakuba kungavamile ukudideka nento engokoqobo.
Imibiko ye-Anecdotal kanye nocwaningo lwakamuva lubonisa ukuthi ukuphathwa okukodwa kwe-psilocybin kungakhulisa ukucabanga okunokuzwela nokuzwela ngakho-ke kungaba ukwelashwa okungahle kwenzeke ekuziphatheni kokuqonda nakwezenhlalo. Imiphumela yocwaningo “Ukucabanga okubalulekile nozwela” (Mason et al. 2019) kubonisa ukuthi i-psilocybin ithuthukisa ukucabanga okuphambene nokuzwelana ngokomzwelo ekuseni emva kokusetshenziswa. Ukuthuthukiswa ekucabangeni okuguquguqukayo, ukuzwelana ngokomzwelo kwe-valence, nenhlalakahle kwaqhubeka izinsuku eziyisikhombisa ngemuva kokusetshenziswa. Izinguquko ezincane ezithinta uzwela ezihambisana nezinguquko enhlalakahleni. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukuphathwa okulodwa kwe-psilocybin endaweni yokuhlalisana kungase kuhlotshaniswe nokuthuthukiswa okuncane kokucabanga kokudala, ukuzwela, nokuphila kahle.